Mangovitra ve ny alikako | Tontolo alika
Fa maninona no mihozongozona ny alikako
Ny fanairana amin'ny alika dia mety manana antony maro samihafa izay tsy maintsy fantatsika mba hihetsika mifanaraka amin'izany. Aorian'izay vao afaka manampy anao amin'ny fomba tsara indrindra izahay. A) Eny, hihamafy hatrany ny fifandraisanayIzay tsy ratsy mihitsy, sa tsy izany?
Ampahafantaro anay maninona no mangovitra ny alikako.
Ny antony mahatonga ny alika hangovitra dia:
Mangatsiaka: no mahazatra indrindra. Rehefa ambany ny mari-pana ary tsy ampy ny volo miaro ilay alika, dia isaky ny mamoaka azy io izahay dia hangatsiaka. Mba hisorohana an'io dia tena ilaina ny mametraka palitao alika aminy.
Tahotra na fientanam-poOhatra, rehefa maheno tabataba mafy dia mafy izy, raha efa niharan'ny fanararaotana taloha, na raha handeha ho any amin'ny toerana fantany fa hanana fotoana mahafinaritra dia afaka manomboka mihontsona izy. Ny zavatra tsy maintsy ataontsika amin'ireto tranga ireto dia ny milalao miaraka aminy, toy ny Kong, mba hampifantohany ny kilalao ny sainy fa tsy amin'ny antony mahatonga azy tsy mahazo aina. Amin'ny toe-javatra goavambe, izay lasa mitaintaina be ilay alika, dia tsara ny mangataka fanampiana amin'ny etolozista alika.
hypoglycemia: fahita matetika amin'ny alika kely ity, na dia tsy maintsy miambina hatrany aza isika, na inona na inona haben'ny namantsika. Raha tsy nisakafo nandritra ny andro maromaro ianao ary nangovitra, dia mety ho ambany ambany noho ny mahazatra ny tahan'ny glucose ao amin'ny ranao. Amin'ity tranga ity dia mila manatona mpitsabo vetivety ianao.
fanaintainana: raha masiaka be dia afaka mampangovitra ny biby. Ka, na manana ianao Colic toy ny hoe sendra nisy lozam-pifamoivoizana lehibe ianao dia mety hahatsapa ho ratsy be dia be ka manomboka mihozongozona. Raha izany no mitranga amin'ny volonao, dia tokony hangataka fanampiana ara-pitsaboana haingana araka izay tratra ianao.
Syndrome Shaker: Fahita eo amin'ireo karazana kely. Anisan'ireo soritr'aretina mahazatra indrindra ny fanintona, ny fahalemen'ny rantsambatana ary ny fangovitana. Raha mieritreritra izahay fa manana izany dia tsy maintsy manatona mpitsabo veterinera izahay.
Manantena izahay fa manomboka izao dia ho azonao tsara kokoa ny antony mangovitra ny alikanao 🙂.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » curiosities » Fa maninona no mihozongozona ny alikako
Fantaro ny fofon'ilay alika
Alika fitsaboana ho an'ny be antitra